Ny trano Anne Frank | Vaovao momba ny dia
Mariela Carril | | Amsterdam, Inona no ho hita
Samy efa nandre ny tantaran'i Anna Frank. Amin'ny lafiny iray na amin'ny fomba hafa, noho ny famakiana ny boky, ho an'ny horonantsary, ho an'ny fanadihadiana sasany na fotsiny satria nisy olona niresaka momba izany rehefa niseho ny resaka Ady Lehibe II tamin'ny lahateny iray.
Ny horohoro nazia dia nahatonga ny fianakavian'i Ana niafina tao an-tranon'i Amsterdam ary androany dia misokatra ho an'ny besinimaro io trano io Ny trano Anne Frank, izay lasa iray amin'ireo tranombakoka notsidihina indrindra teto an-tanàna. Ho any Amsterdam ve ianao? Avy eo tsy afaka mitsahatra amin'ny famangiana azy ianao.
1 Anna Frank
2 Ny trano Anne Frank
3 Ny diary sy ny tranombakoka
Ny anarany dia Annelies Marie Frank ary teraka izy tany Frankfurt tao 1929 eo an-tratran'ny mpivady jiosy liberaly izay nanana fivarotam-boky tao an-tanàna. Saingy taorian'ny fandresen'ny antoko Nazi tamin'ny fifidianana tamin'ny 1933 dia nanomboka niova ny toe-javatra ary nanapa-kevitra ny hanaiky tolotra asa any Amsterdam ny raim-pianakaviana.
Tany izy dia nikarakara orinasa iray nivarotra akora nalaina avy tamin'ny voankazo ary fotoana fohy taorian'izay, niaraka tamin'ny fianakaviany nipetraka tao an-tanàna, nandamina iray hafa natokana amin'ny fivarotana zava-manitra sy anana izy.
fa tamin'ny 1942 dia nanafika an'i Netherlands i Alemana ary niparitaka ny horohoro rehefa nanomboka ny fanenjehana ny Jiosy tamin'ny alàlan'ny fampiharana lalàna manasaraka ny governemanta fibodoana. Tahaka ny Jiosy hafa, ny Franks dia efa nieritreritra ny hifindra monina fa tsy nahatanteraka ny tetik'izy ireo. Avy eo, ny zanaka roa vavy mpivady dia tsy maintsy nanova sekoly ary nanova ny fananany ny orinasam-pianakaviana mba tsy ho voaroba.
Tamin'ny faha-13 taonany dia nahazo boky autografie i Ana ary izany no boky lasa azy diary manokana. Nanapa-kevitra ny hiafina ny fianakaviana tamin'io taona io ihany, iray volana monja taorian'ny fitsingerenan'ny andro nahaterahany, tamin'ny volana Jolay, rehefa nahazo baiko handeha tany amin'ny toby fitanana.
Ny zana-kazo niafina tao amin'ny trano misy rihana telo ambonin'ny biraon'ny orinasa izy ireo eo ambanin'ny elo sasany amin'ireo mpiasa tsy mivadika aminy. Nandao ny efitranony izy ireo toy ny hoe nandositra tampoka ary naka efitrano izay miafina ao ambadiky ny boky.
Olona telo ihany no nahalala fa niafina tao ilay fianakaviana ary izy ireo no miandraikitra ny famahanana azy ireo sy ny fampitana vaovao momba ny zava-mitranga any ivelany. Fotoana fohy taty aoriana dia nanana orinasa izy ireo rehefa nisy fianakaviana jiosy hafa nanatevin-daharana, ny Pels, ary avy eo dia mpitsabo nify namana iray amin'ny fianakaviana. Ny zava-drehetra dia voarakitra ao amin'ny diary izay nitondran'i Ana azy ary koa ny fihenjanana vokarin'ny fiainana an-tany amin'ny toerana kely misy olona maro ary amin'ny fanerena be.
Diary manokana dia tsara satria ny fanoratan-tena dia manambara ny toetrantsika sy ny fijerintsika an'izao tontolo izao ary noho izany, ny fanarenana izay azontsika atao mandritra ireo andro nandanian'ireo olona ireo tao amin'ny fahababoana dia ahafahantsika mahita tontolo iray goavambe. Ny andalana farany dia nosoratana tamin'ny 1 Aogositra 1944, roa taona mahery taorian'ny nidirana tao amin'ireo efitrano miafina.
Ny 4 aogositra dia niditra ny polisy sy ny SS ary voasambotra avokoa. andro vitsivitsy taty aoriana dia nafindra tany amin'ny toby fitaterana izay efa nisy Jiosy mihoatra ny iray hetsy. Ireo izay nanampy azy ireo dia tsy nanana vintana tsara kokoa fa afaka nody tany an-trano, nanangona ny taratasy, ny sarin'ny fianakaviana ary ny diary tavela tao an-trano. Notehirizin'izy ireo ny zava-drehetra tamin'ny fanantenana ny hamerina azy io aorian'ny faran'ny ady.
Tsy fantatra mazava ny fomba nivoahan'ny vaovao izay niafenan'izy ireo tao an-trano teny ambonin'ny lakandrano. Tamin'ny volana septambra tamin'io taona io Nentina tany Auschwitz ny vondronaEfa 15 taona i Ana tamin'izay. Weather nafindra tany Bergen-Belsen izy ireo, izay nahafatesan'ny mosary ny reniny, na dia fahita matetika aza ny trangana typhus, typhoid ary bibikely hafa ka heverina fa maty tamin'ireo rahavavy ireo ny rahavavy.
Eo Maty ny rahavaviny, Margot, ary maty andro vitsivitsy i Ana. Herinandro vitsivitsy monja taty aoriana dia navotsotry ny anglisy ny toby.
Ny diary sy ny tranombakoka
Ny marina dia ny rain'i Ana, Otto Frank, tsy nisy matyoy amin'ny faran'ny ady ny mpiasany taloha dia nanome azy izay nangoniny tao an-tranomankany Ny famakiana ny eritreritra akaiky momba ny zanakavavy novonoina dia tsy maintsy nahagaga.
Ny voalohany famoahana ireo naoty dia tamin'ny 1946 ary navoaka tany Alemana sy France izy ireo tamin'ny 1950. Nanomboka teo dia nanjary be mpitia io, nanjary a milalao ary tamin'ny 1959 ny horonan-tsary.
Ny tranon'ny tranom-bakoka dia miorina amin'ny lakandranon'i Prinsengracht, ao afovoan'i Amsterdam. A Trano tamin'ny taonjato faha-XNUMX ary ny varavarana nosokafana ho tranombakoka tamin'ny 1960. Misy a fampirantiana maharitra momba ny fiainana sy ny vanim-potoana niainan'i Anne Frank ary anio Iray amin'ireo tranombakoka telo be mpitsidika indrindra any Netherlands izy io.
Nisy gorodona maromaro tao an-trano ary anisan'ireny ny efitrano miafina izay nialokalofan'izy ireo tamin'ny Nazia ary niantso izy ireo achterhuis na ny fampidirana miafina. Tsy tazana avy ivelany izany ary sahabo ho 46 metatra toradroa ny habeny.
Mandritra ny fitsidihana dia ho hitanao ity fanampiny fanampiny ity, ny efitrano izay nozarain'i Ana tamin'ny zanaky ny fianakaviana hafa, ny efitrano iraisana ary ny fampisehoana fananana manokana, sary ary raha tsy izany.
Na dia nisokatra tamin'ny taona 1960 aza ny tranombakoka noho ny isan'ny mpitsidika dia nakatona izy io ary nohavaozina teo anelanelan'ny 1970 sy 199. Tamin'ny 2001 Queen Beatrix no nanokatra azy io indray misy toerana malalaka kokoa, tranomboky sy trano fisakafoanana. Namboarina indray ny endriny tamin'ny 1940.
Fampahalalana azo ampiharina:
toerana: Prinsengracht 263-267. Ny fidirana dia eo amin'ny zoron'ny Westmarkt, 20.
ahoana no ahatongavana any: 20 minitra fotsiny avy eo amin'ny Station Central Amsterdam, fa afaka mankany ianao amin'ny tram 13 na 17 miala eo amin'ny fijanonana Westmarkt.
ora: misokatra manomboka amin'ny 1 aprily ka hatramin'ny 1 novambra isan'andro manomboka amin'ny 9 maraina ka hatramin'ny 10 hariva ary manomboka amin'ny 1 Novambra ka hatramin'ny 1 aprily isan'andro manomboka amin'ny 9 maraina ka hatramin'ny 7 hariva ary amin'ny Sabotsy ka hatramin'ny 9 hariva.
vidiny: 10 euro isaky ny olon-dehibe ary ankizy 10 ka hatramin'ny 17 mandoa 5 euro. Voasazy 50 cents ny famandrihana.
misy torolàlana am-peo sy fitsangatsangana. Azonao atao ny misoratra anarana amin'ny fampisehoana fampidirana izay maharitra antsasak'adiny fotsiny ary manome topy maso ny fiainan'i Ana ao anatin'ny tontolon'ny Ady Lehibe Faharoa. Amin'ny teny anglisy ary tafiditra ao amin'ny fitsidihan'ny tranombakoka.
Azonao atao ny mividy tapakila an-tserasera amin'ny alàlan'ny fisafidianana ny daty sy ny fotoana mialoha hatramin'ny roa volana mialoha. Miezaha mividy azy ireo mialoha satria be ny fangatahana, indrindra raha mikasa ny handeha amin'ny faran'ny herinandro na fialantsasatra ianao. Azonao atao ny mividy tapakila hatramin'ny 14 indray mandeha.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny dia » tanàna » Amsterdam » Ny trano Anne Frank
Inona no hatao any Tenerife